ခွေးများအတွက် Capes, ပူနွေးသောသံပရာသီး | ခွေးကမ္ဘာ
နတ် Cerezo | 15/11/2021 12:29 | ခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ခွေးခေါင်းစွပ်များသည် အေးသောလများတွင် အထူးသဖြင့် မိုးရွာချိန် သို့မဟုတ် နှင်းကျပါက အလွန်အသုံးဝင်သော ၀တ်စုံဖြစ်သည်။အရသာအားလုံးအတွက် တကယ်ရှိပေမယ့် (လူနဲ့ ခွေး)- မိုးကာအင်္ကျီ၊ အင်္ကျီတစ်ထည်နဲ့တောင် ဝတ်စုံတွေ။
ဤဆောင်းပါး၌ ခွေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံး အဖုံးတွေအကြောင်း ပြောပြပေးပါမယ်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ၊ ခွေးများကိုအဝတ်အစားနှင့်ဆက်ဆံပုံနှင့်သူတို့ကိုဖုံးကွယ်ရန်ကောင်းလျှင်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။ ငါတို့သည်လည်းဤအခြားဆောင်းပါးထံမှအကြံပြုပါသည်။ ခွေးငယ်လေးများအတွက် အဝတ်အစားများ- အနွေးထည်နှင့် အင်္ကျီများ!
Peppo နှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်-၁၀၀...
Trixie 30510 - Cape...
1.2 လှပသောခွေးများအတွက် Cape
1.3 ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော မိုးကာအင်္ကျီ
1.5 Tartan print cape အင်္ကျီ
1.6 ဖုံးကွယ်ထားသော အင်္ကျီ
1.7 capita နှင့်အတူစုန်းဝတ်စုံ
2 အလွှာအမျိုးအစားများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ
2.2 ဝတ်စုံအဖြစ် အလွှာများ
3 ငါ့ခွေးကို ဝတ်လို့ရမလား
4 ခွေးတွေအဝတ်အစားဝတ်တတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဤ cape-type ဂျာကင်အင်္ကျီသည် ရှေ့ပိုင်းမှ ချိန်ညှိထားရသောကြောင့် ဝတ်ဆင်ရန် အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။ ၎င်းတွင် ရွေ့လျားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့် elastic band တစ်ခု ပါရှိသောကြောင့် အလယ်ပိုင်းတွင် ခွေး၏နောက်သို့ ချိန်ညှိပေးသည်။ ချည်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အလွန်နွေးထွေးပြီး ပျော့ပျောင်းပြီး အရောင်များစွာ (ပန်းရောင်၊ အဝါ၊ မီးခိုးရောင်နှင့် အပြာ) နှင့် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်ဘက်မှာလည်း အပေါက်သေးသေးလေး ပါတာကြောင့် ကြိုးကို ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။
အနုတ်လက္ခဏာအဖြစ် အသုံးပြုသူအချို့က အရွယ်အစားသေးငယ်သည်ဟု ညည်းညူကြသည်။ထို့ကြောင့် ဝယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါက သင့်ခွေးကို ကောင်းစွာတိုင်းတာပြီးကြောင်း သေချာပါစေ။
ဒီ cape coat က နူးညံ့ပြီး အရမ်းနွေးထွေးရုံသာမက ဝတ်ရတာလည်း အရမ်းလွယ်ကူပါတယ် (လုံးဝဖွင့်ပြီး velcro နဲ့ ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်)၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း သပ်ရပ်လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းလည်း ရှိပါတယ်။ မီးခိုးရောင်သည် ပို၍ ၀တ်ဆင်တတ်သော်လည်း အရွယ်အစား ကြီးမားသော ခွေးများအတွက် အထူးသင့်လျော်သော်လည်း ၎င်းကို အရောင်များစွာဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။ ကုတ်အင်္ကျီတွင် ပိုမိုလှပစေမည့် အသေးစိတ်အချက်နှစ်ချက်ပါရှိသည်- ခွေးကို အအေးဒဏ်မှကာကွယ်ပေးသည့် အလှည့်ကျကော်လာနှင့် အမြီးကိုထည့်ထားရန် အောက်ခြေတွင် သားရေကွင်းပတ်ထားပြီး အထည်မရွေ့စေရန်နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟု ခံစားရစေသည်။
Dociote Waterproof အတွက်...
ခွေးတွေအတွက် အဖုံးတွေထဲမှာ မိုးကာအင်္ကျီတွေက အသုံးဝင်ဆုံးပါပဲ။ ဤမော်ဒယ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးလှုပ်ရှားမှုများကို အဟန့်အတားမရှိသော စကတ်များပါသောကြောင့် ၎င်းတွင် cape အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် မြင်နိုင်စွမ်းကို ပျောက်ကွယ်မသွားစေရန် ပွင့်လင်းမြင်သာသော အပေါ်ပိုင်းပါသော ပါးပျဉ်၊ ရောင်ပြန်အမြှောင်နှင့် ကြိုးကို ဖြတ်သွားနိုင်ရန် velcro ဖြင့် လုံခြုံအောင် ကာထားသော နောက်ကျောတွင် အပေါက်တစ်ပေါက်ကဲ့သို့သော အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အသေးစိတ်အချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည်လုံးဝရေစိုခံသည်။
ခရစ္စမတ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် သင့်ခွေးကို မေးချင်နေလိမ့်မယ်။ သူသဘောတူရင် (သူမလိုချင်တဲ့အရာကို ၀တ်ဖို့ အတင်းအကြပ်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ သတိရပါ) လိုက်ဖက်တဲ့ဦးထုပ်နဲ့ ဒီအနီရောင်အစွပ်လေးက တကယ့်ကို ချစ်စရာလေး. ၎င်းကို velcro ဖြင့်ချိန်ညှိထားပြီး အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး နွေးထွေးသည့်အပြင်၊ သင်၏လှုပ်ရှားမှုများကို အဟန့်အတားဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ။
Tartan print cape အင်္ကျီ
Muddy Paws Coat အတွက်...
စကော့တလန် တာတန်ထက် ပိုစတိုင်ကျတဲ့ အရာအနည်းငယ်ရှိပါတယ်၊ စတိုင်လ်ကျကျနဲ့ လူသားတွေအတွက်တင်မကဘဲ စတိုင်လ်ကျစေမယ့် ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ခွေးတွေအတွက်ရော။ Westy အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ဤပုံစံဖြင့် သင့်ခွေးသည် အလွန်နွေးထွေးသော လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ခလုတ်နှစ်ခုဖြင့်သာ အရှေ့မှ ချိန်ညှိနိုင်သောကြောင့် ဝတ်ဆင်ရန် အလွန်လွယ်ကူသည် (သင်ခြေထောက်များကို မည်သည့်နေရာတွင်မျှ ထားရန်မလို) နှင့် အလယ်တွင် ခါးပတ်တစ်ခု ပါရှိသောကြောင့် ဝတ်ဆင်ရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။
ဤ poncho အမျိုးအစား မိုးကာအင်္ကျီသည် တိရစ္ဆာန်၏ ဦးခေါင်းကို လည်ပင်းတွင်သာ ထည့်သွင်းရသောကြောင့် ဝတ်ဆင်ရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ နောက်တော့၊ အထည်အလိပ်များ အလွန်မလှုပ်ရှားနိုင်အောင် ခါးပတ်ကို velcro နှင့် buckle ဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်ပြီး နောက်ဘက် elastic ကြိုးနှစ်ခု၊. ဖုံးကွယ်ထားသော ပရင့်ထုတ်ခြင်းနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိစေမည့်အပြင် မိုးကာအင်္ကျီသည် အလင်းရောင်အားနည်းချိန်တွင် သင့်ခွေးကို လျင်မြန်စွာရှာဖွေရန် ရောင်ပြန်အကန့်ပါရှိခြင်းအတွက် ထင်ရှားသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ဒီထုတ်ကုန်ကို အရောင်နှစ်မျိုးနဲ့ အရွယ်အစားများစွာနဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။
Halloween အတွက် အလွန်အေးမြပြီး ပြီးပြည့်စုံသော ၀တ်စုံဖြင့် ပြီးသွားသည် (ကျွန်ုပ်တို့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် မငြီးငွေ့သော်လည်း မင်းရဲ့ခွေးက ဝတ်ရတာ မကြိုက်ရင် အတင်းမတိုက်ပါနဲ့)။ ၎င်းတွင် အပိုင်းနှစ်ပိုင်း ပါဝင်သည်။ ရှေ့နှင့်အလယ်တွင် လိုက်ဖက်သော တောက်ပြောင်သော ဖဲချပ်ကဲ့သို့ ပစ္စည်းများ၏ lilac cape ပြီးတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဦးထုပ်လေးတွေနဲ့ ကောက်ကြောင်းလေးတွေ ထွက်လာတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတာကလွဲလို့ အထူးထူးခြားမှုမရှိပါဘူး။
ခွေးများအတွက် အကွက်များ ၎င်းတို့သည် ကျယ်ပြန့်သော အမျိုးအစားနှစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို နွေးထွေးသော သို့မဟုတ် ခြောက်သွေ့သော သို့မဟုတ် ၀တ်စုံတစ်ခုအဖြစ်ထားရှိခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အပေါ် မူတည်သည်။
အင်္ကျီအဖြစ်၊ ခွေးများအတွက် ခေါင်းစွပ်များသည် ဝတ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော အိုင်ဒီယာတစ်ခုဖြစ်သည်။. သာမာန်အားဖြင့် ၎င်းတို့တွင် ရှေ့ခြေထောက်များကို ထည့်သွင်းထားသည့် ရှေ့တစ်ပိုင်းနှင့် အပိုင်းအစ၏ အလယ်တည့်တည့်တွင် ခါးကို ဆုပ်ကိုင်ထားသောကြောင့် အကျီကို မပျံနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီစနစ်ရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်က ဝတ်ရတာ သက်တောင့်သက်သာရှိရုံသာမကဘဲ ခွေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မရှုပ်ထွေးစေဘဲ ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကို ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အခြားသော အကြီးစား အဖုံးအမျိုးအစားများမှာ ရုပ်ဖျက်ရန် အသုံးပြုသည့် အထုပ်များဖြစ်သည်။ ခရစ္စမတ်မှာ ဝတ်ရတာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အဝတ်အစား ဒါမှမဟုတ် Halloween ဒါမှမဟုတ် Carnival အတွက် ၀တ်ဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အကျီတွေက မင်းရဲ့ခွေးကို သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်၊ စုန်းမကြီး၊ မှော်ဆရာ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်... သို့သော်လည်း၊ ပိုမိုလှပသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သောကြောင့်၊ ဤရွေးချယ်မှုသည် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းဖြစ်စေသည်။အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်အတိုင်း။
ခွေးများသည် ၀တ်စားဆင်ယင်သောအခါတွင် အလွန်ချစ်ဖို့ကောင်းကြောင်း သံသယဖြစ်စရာမရှိပေ။ ဆက်သွယ်မှုအကြောင်းအရင်းကြောင့်၊ ငါတို့ခွေးက ငါတို့ကို "ဒီဆွယ်တာအင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်" လို့ မပြောနိုင်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို မသိဘဲ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း (အအေးဒဏ်ကို ရှောင်ရှားဖို့ အဝတ်အစားနဲ့ ပတ်သက်ရင် မတူပါဘူး။ လေတိုက်သည်ဖြစ်စေ မိုးရွာလေလေ၊ သူတို့ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ကြသောကြောင့်)၊ ၀တ်စုံတွေ ၀တ်တာက သိပ်ကောင်းတဲ့ အကြံမဟုတ်ဘူး။.
မင်းသူတို့ကို ဝတ်စုံနဲ့ ဝတ်ရရင် ဘယ်သူမှ မင်းကို တားမှာမဟုတ်ဘူး၊ အနည်းဆုံး အောက်ပါတို့ကို မှတ်သားထားပါ။:
သင့်အတွက် အဆင်ပြေမယ့် ဝတ်စုံကို ရှာပါ။ သက်တောင့်သက်သာ၊ ဝတ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး သင့်လှုပ်ရှားမှုများကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါ။. ထို့အပြင်၊ မှန်ကန်သောအရွယ်အစားကိုရှာဖွေပြီး အလွန်အမင်း မဖိမိအောင်ကြိုးစားပါ။
တ ဦး တည်းရှာပါ ယားယံခြင်းမရှိသောအထည်နှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်အလင်း.
Y အားလုံးထက်၊ အဲဒါကို အတင်းမလုပ်ပါနဲ့။. အဆင်​မ​ပြေတာမြင်​ရင်​ အဝတ်​အစားကိုချက်​ချင်းဖယ်​ပါ။ မသက်မသာဖြစ်မှုသည် အဝတ်အစားကို ဖယ်ရှားရန် ကြိုးစားရုံသာမက အများအပြား နမ်းခြင်း၊ သမ်းခြင်း သို့မဟုတ် မတ်တပ်ရပ်ခြင်းတို့လည်း ထင်ရှားလာနိုင်သည်။
အလှကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ ခွေး သို့မဟုတ် အခြားတိရစ္ဆာန်များအတွက် လူသားများအတွက် ထုတ်လုပ်ထားသည့် မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမှ မသုံးပါနှင့်. ဒါတွေက သူတို့အတွက် မရည်ရွယ်ဘဲ ပူလောင်မှုနဲ့ မသက်မသာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
မင်းရဲ့ခွေးကို အသုံးချချင်ရင် အလွန်အေးသော သို့မဟုတ် မိုးရာသီတွင် သင်နေထိုင်သောကြောင့် အဝတ်အစားဝတ်ပါ။, မှတ်ရန်:
တချို့မျိုးစိတ်တွေက အအေးအတွက် ပြင်ဆင်ထားပြီးသားသင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက် အင်္ကျီမဝယ်မီ သင့်ကိုယ်သင် သေချာစွာ အသိပေးသည့်အရာ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အသေးဆုံးခွေးများသည် အနွေးထည်အင်္ကျီကို အများဆုံးတန်ဖိုးထားလေ့ရှိကြသည်။
တ ဦး တည်းရှာပါ သက်တောင့်သက်သာရှိသော ခွေးအင်္ကျီ. မိုးကာအင်္ကျီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကုတ်အင်္ကျီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီဇိုင်းက ခွေးရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ သူ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အဟန့်အတားမရှိ၊ အကြီးကြီးမဟုတ်သလို သေးလွန်းတဲ့ အရွယ်အစားကလည်း အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို စစ်ဆေးပါ။
အပြင်သွားတဲ့အခါ တစ်ယောက်တည်း မဝတ်ပါနဲ့။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ကျင့်သုံးပါ။ အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ ခဏထားလိုက်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူ့ကို ဘယ်တော့မှ သူမနဲ့ မအိပ်စေဘဲ ဒါမှမဟုတ် ကြောက်လန့်နေဖို့ သူ့ကို မျက်ခြေမပြတ်စေပါနဲ့။
သင်ရှာလိုရသည် ခွေးအဝတ်အစားအမျိုးမျိုးအလွှာများသာမကဘဲ အထွေထွေစတိုးဆိုင်များမှ အထူးပြုနေရာများအထိ အမျိုးမျိုးသောနေရာများစွာတွင်၊ ဥပမာအားဖြင့်:
En အမေဇုံ မိုးကာအင်္ကျီ၊ ကုတ်အကျီ သို့မဟုတ် ဝတ်စုံပင်ဖြစ်စေ အမျိုးမျိုးသော အလွှာများစွာကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ တခါတရံ အရည်အသွေး အနည်းငယ် ညံ့သောကြောင့် မှတ်ချက်များကို ဂရုပြုပါ။ သို့သော် ကောင်းသောအချက်မှာ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း အိမ်တွင် ရရှိနိုင်ပြီး မော်ဒယ်များစွာ ရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
En အထူးပြုစတိုးဆိုင်များ TiendaAnimal သို့မဟုတ် Kiwoko ကဲ့သို့ သင့်ခွေးအတွက် အနွေးထည်များကိုလည်း သင်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များ ရှိရုံသာမက သင်ရှာနေသည့်အရာ ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးရန် ၎င်းတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဗားရှင်းများသို့လည်း သွားနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုကတော့ ကြိုက်တဲ့နေရာတွေပါ။ Etsyဤတိရိစ္ဆာန်များအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လက်လုပ်အ၀တ်အထည်များကို သင်ရှာတွေ့နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊၊ လုံးဝစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပြီး လက်လုပ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လို့ သူတို့မှာ ကျန်တဲ့ရွေးချယ်စရာတွေထက် အများကြီးပိုစျေးရှိပါတယ်။
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည့် ဤခွေးအဖုံးများကြားတွင် သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့် အကိုက်ညီဆုံးကို ရှာတွေ့ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ပြောပြပါ၊ မင်းရဲ့ခွေးက ခေါင်းစွပ်ကောင်းကောင်းဝတ်သလား။ မင်းက ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ ဆောင်းရာသီမှာ ဘယ်အရာက မင်းနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ခွေးများအတွက် အဖုံးများ ၊ ပိုနွေး မဖြစ်နိုင်